Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neekreyithi zokuzalela iintlanzi | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Izixhobo, Ukuzaliswa kweentlanzi
Ukuba unayo i-aquarium enenani elikhulu leentlanzi, kunokwenzeka ukuba uninzi lwazo luvelise kwakhona kwaye lube nolutsha. Kule meko, olona khetho lulungileyo kukuzahlula kwelinye i-aquarium ukuze ezinye iintlanzi zingazityi okanye zibenzakalise. Ngesi sihlandlo kukho iipeni zokuzalela. Kule nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi Iipeni zokuzalela iintlanzi, zeziphi kwaye ziyasebenza okanye azisebenzi.
Ukuba ufuna ukuba usiba lokuzala kwaye wazi yonke into malunga nalo, apha ungafunda. Kufuneka uqhubeke ufunda.
1 Eyona ikreyiti yokuzalela iintlanzi
2 Yintoni usiba lokuzalela
4 Ngaba iipeni zokuzalela zilungile ngokwenene?
5 Iingxaki eziphambili
6 Ukucoca indlu
Eyona ikreyiti yokuzalela iintlanzi
Amakhreyithi eFarrowing yeentlanzi, 4 ...
UMarina 10933 ...
UMarina 10936 ...
Yintoni usiba lokuzalela
Njengoko besitshilo kwintshayelelo, usiba lokuzala sisixhobo seplastiki esinezinto ezintathu okanye ezine. Eyokuqala sisiqwenga seplastiki esikhonzayo ukwenzela ukuba, xa enye yeentlanzi zethu ifuna ukuba nenzala, inokuzihlukanisa nezinye ukuze zingayenzakalisi inzala. Ukuze ukwazi ukuzala kakuhle, iintlanzi zifuna indlwane yazo kwaye zikhuselwe ngokupheleleyo.
Zininzi iintlobo zeentlanzi apho inkunzi iba ndlongondlongo kakhulu kwaye izikhusele ngokuziphatha okungagungqiyo xa kufikwa kumba wokukhusela indlwane yayo. Ukuziphatha okukhohlakeleyo kunokubangela iingxaki ezinkulu kwi-aquarium jikelele. Ke ngoko, ukusetyenziswa kweepeni zokuzalela kubalulekile. Ezi zikhongozeli zeplastiki zinesiciko saphezulu esibakhusela kumaqondo obushushu angaphandle kwaye sibathintele ekubalekeni. Ke asiyi koyika ukuba iintlanzi ezithile ziya kusaba kuthi.
Eyona nto intle malunga nezi zikhongozeli kukuba inayo isiqwenga esivumela ukwahlula abantu ababhinqileyo, kuba inokuba kunjalo ukuba ezimbini ziya kudlalwa ngaxeshanye. Kukho nezinye iindidi zezikhongozeli ezineplastikhi kunye nemingxunya yemeshini ezithengiswa ngokungathi zizintshontsho. Ngaphezulu kokukhusela, isebenza ukugcina i-fry ngaphakathi kwi-aquarium ngelixa ikhula ngokwaneleyo ukuba ingatyiwa yenye intlanzi.
Xa kuziwa kwixesha lokudibana kunye nokuzala kweentlanzi zasemanzini, ngumsebenzi onzima. Zininzi iintlanzi ezihlala endaweni enye, ke, kungcono ukubabeka bodwa ukuze ubakhusele kwaye uphinde ubazise kwi-aquarium xa bekwazi ukuzikhusela.
Njengoko besesitshilo amatyeli aliqela, eyona nto iluncedo kakhulu kolu hlobo lwesikhongozeli kukuthintela abancinci bethu kunye nefry ekuhlaselweni ziintlanzi ezinkulu. Iipeni zokuloba zisetyenziswa kunye ne-ovoviviparous gravid females.
Abancinci baba sesichengeni xa Bazelwe ngenxa yokuba umntu obhinqileyo akabaniki nkathalo. Ngeli xesha banokuthi babanjwe ngabazali babo. Inenye into eluncedo, enjengokuhlulahlula ezinye iintlanzi ezigulayo okanye ukubangela ukungavisisani okuninzi de sibone isisombululo esinokusinika.
Kukulungele ukulahla zonke ezi ngxaki kwi-aquarium ephambili. Usiba lokubhala lubekwa kwindawo yangaphambili ye-aquarium ukuze lube nolawulo ngalo lonke ixesha okukulo kwaye ezinye iintlanzi ziyaqhubeka nokubona abatsha. Indawo ekubekwe kuyo iintlanti zamantshontsho akufuneki ibe nokukhanya okanye umoya omkhulu kakhulu. Kuyacetyiswa ukuba ubambe ibhokisi yamantshontsho kunye neekomityi zokutsala ezibonelelweyo okanye uncamathisele iglasi yangaphambili nge-aquarium.
Iipeni zokufusa zikhona efikelelekayo ngexabiso kwaye ikhona iimodeli ezininzi. Inyaniso kukuba kufanelekile ukuba nayo.
Ngaba iipeni zokuzalela zilungile ngokwenene?
Iipeni zokuzalela zikulungele ukunceda i-fry ukuba ikhule ngaphandle koloyiko lokutyiwa. Nangona kunjalo, ukuba sazisa uninzi okanye ngaphezulu kwabafazi ngaphakathi banokutya amancinci abanye. Gcina ukhumbula ukuba ezi peni zokuzalela zincinci kune-aquarium ephambili, ngenxa yoko iintlanzi zinokuqala ukubanengxaki yoxinzelelo ukuba zihlala ixesha elide. Ukuba sidibanisa iimazi ezininzi nangaphezulu ngaphezulu, siza kuqala ukwandisa uxinzelelo lwendalo kwaye, ke, uxinzelelo lwezi ntlanzi.
Ukuthintela le meko, asinakushiya abantu basetyhini ezindlwini ixesha elininzi. Ezi peni zokukhulisa zilungele ukufumana ulutsha kunye nefry kuyo Intlanzi yeguppy. Kuya kufuneka ucinge malunga nobungakanani babasetyhini ukwabela ubungakanani bepeni lokuzala. Zama ukubabonelela kakuhle nganye nganye ukuze uxinzelelo abanalo lube ncinci.
Nje ukuba zaziswe, Ifry ayinakubekelwa bucala ixesha elide. Kungenxa yokuba, nangona usiba lokuzala lukhulu, aluthelekiswa ne-aquarium. Ukuhlala kwindawo enobungakanani obuncinci, abahlali bekhula kakhulu kwaye ukukhula kwabo kuphazamiseka kwinqanaba labadala.
Kakhulu kuyacetyiswa ukuba kugcinwe iinyanga ezimbini kwaye ugcina amanzi ekwimeko entle.
Njengokuba ezi zikhongozeli zingasinceda ukuba sikwazi ukuvelisa ngcono iintlanzi zethu, zikwanazo nezinye iingxaki ezingundoqo. Eyokuqala luxinzelelo olubangelwa ngabantu basetyhini. Ukuba udada kwi-aquarium enkulu, waziswa kwinto encinci ene-morphology eyahlukileyo. Oku kudala ukungcangcazela okubi kweentlanzi.
Kuyacetyiswa ukuba kususwe umntu obhinqileyo xa ukuzala kuphelile ukuthintela ukuba angazityi. Enye into ebuyisayo ngaphandle koxinzelelo yile Ukuhamba kakubi kwamanzi. Kule meko, kungcono ukuba ungabinalo ixesha elininzi lokuloba iintlanzi ngaphakathi ukunqanda ukuma kwamanzi kunye neoksijini engalunganga. Nangona kunjalo, ezinye iintlobo zeentlanzi ezinje iBetta baziqhelanisa kakuhle neemeko ezinetyhefu, kungoko iipeni zokuzalela zilungele bona.
Xa siqala ukusebenzisa iipeni zokukhulisa iintlanzi, eyona nto iqhelekileyo yeyokuba, xa ukukhanya kukhanya kuyo, ulwelwe oluhlaza nolumdaka luqala ukuvela. Ngesiponji singazisusa. Sukusebenzisa iscourer esenziwe ngesinyithi okanye uzakukrwela umphezulu wepeni yokuzala.
Inyaniso yokuba ayisiyo-aquarium ngokwayo ayikukhululi kwizibophelelo ezinje ngokuhlaziya amanzi. Ungayibhukuqa ipeni yokuzalela kancinci ukuze amanzi aneentsalela zokutya kunye nelindle aphume ngeegrates. Ngale ndlela, owasetyhini akunyanzelekanga ukuba asuswe kwaye sinokuwahlaziya ngokugqibeleleyo amanzi.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso ungasebenzisa ipeni zokuzalela iintlanzi ngokuchanekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ukuzaliswa kweentlanzi » Iiplanga zokuloba iintlanzi